Ushonile umuntu odubuleke kwesokudubulana kwamaphoyisa nezigebengu | isiZulu
Ushonile umuntu odubuleke kwesokudubulana kwamaphoyisa nezigebengu
Kulimale unogada kubanjwa inkunzi imoto yemali eThekwini
Kudubuleke owesifazane kubanjwa inkunzi imoto yemali eKapa
BUKA: Konke okwenzekile kubanjwa inkunzi imoto yemali
Durban - Useshonile umuntu osebenza emafemini aseParlock enyakatho yedolobha iTheku ngemuva kokudubuleka esigamekweni sokudubulana kwamaphoyisa nabasolwa ngokubamba inkunzi imoto yemali.
Amaphoyisa ophiko loKlebe KwaZulu-Natal aqinisekise ukushona kwalesi sebenzi nokulimala kwabantu abathathu abebesemgwaqeni ngesikhathi kwenzeka isigameko.
USimphiwe Mhlongo, okhulumela lolu phiko, naye uqinisekise ukushona komsolwa wesithupha esibhedlela ebusuku.
OLUNYE UDABA:Basale enkundleni abasolwa abahlanu eThekwini
Abasolwa bazame ukubamba inkunzi imoto yemali eSpringfielf eThekwini. Umsolwa oyedwa ushonele eduzane nenxanxathela yezitolo kuMngeni Road, abanye abasolwa abane bashone ngemuva kokudutshulwa bebaleka eParlock.
"Singakuqinisekisa ukushona komsolwa wesithathu obeqashwe ngamaphoyisa esibhedlela. Abanye abasolwa ababili balindeleke ukuba bavele eNkantolo yeMantshi yaseThekwini kusasa (ngoLwesithathu)," usho njalo.
Amaphoyisa asathungatha umsolwa wesishiyagalolunye.
Isivumelwano sokukhokhela izindleko zamacala kaZuma siphambene nomthetho - DA
Amaqembu aphikisayo afuna incazelo ngesivumelwano phakathi kwehhovisi likaMengameli kanye noJacob Zuma, mayelana nezindleko zamacala akhe, kusukela ngo-2006.
Bamukeleni abantu bokufika, ningesabi ukulahlekelwa yimisebenzi - Ramaphosa
UMengameli Cyril Ramaphosa usenxuse abantu baseNingizimu Afrika ukuba bemukele baphinde basingathe abantu bokufika njengoba izwe lisezinhlelweni zokuthi wonke umuntu aphume aphinde angene ngokukhululeka emazweni ase-Afrika.
'Ubenekusasa elithembisayo umfundi oshayiswe yiloli washona'
Umfundi waseMaitland Secondary owashona engozini uchazwe njengengane ebihlakaniphile futhi ebinekusasa elithembisayo.